WeTransfer: waa maxay sideese u shaqaysaa? | War gadget
Waxaan ka hadli doonnaa dalab ka dhigayay meel ka mid ah kuwa ugu caansan marka la eego wareejinta faylka iyo keydinta daruuraha. Haddii aad u baahato inaad si joogto ah ugu gudbiso feylasha waaweyn shaqaalahaaga ama maamulahaaga, waxaa jira codsiyo yar oo suuqa yaalla oo u dhigmi kara WeTransfer. Tani way fiicantahay gaar ahaan markaad rabto inaad dirto feylal aan mailku kuu oggolaanayn inaad lifaaqdo. Waad u isticmaali kartaa gebi ahaanba bilaash kumana weydiin doonto inaad rukumato si aad u dirto ama u hesho faylasha.
Sidaan soo sheegnay, WeTransfer wuxuu hada kamid yahay codsiyada ugu caansan noocan. Waxaan si faahfaahsan u sharxi doonaa sababta codsigan loogula talinayo barnaamijyada sida Dropbox si loogu isticmaalo kaydinta daruurta. In kasta oo waxa ugu xiisaha badani shaki ku jiro wareejinta feylasha iyadoon diiwaangelin hore u dhex marin dadka isticmaala. Akhriso si aad u ogaato waxa WeTransfer yahay iyo sida ay u shaqeyso.
1 Waa maxay WeTransfer?
1.1 Faa'iidooyinka isticmaalka WeTransfer
2 Sida loo isticmaalo
2.1 Habka ugu fudud
3 Ku isticmaal WeTransfer mobilka
Waa maxay WeTransfer?
WeTransfer waa barxad online ah oo ku dhisan daruurta oo loogu talagalay si aad ugu wareejiso noocyada kala duwan ee faylasha isticmaaleyaasha kale gabi ahaanba bilaashka shabakadda. Waxay noqotay mid ka mid ah codsiyada ugu caansan waaxda iyada oo ay ugu wacan tahay fududaanta adeegsiga, xawaareheeda iyo, wixii ka sarreeya, qiimaheeda 0. Aad ayey faa'iido u leedahay inaad u dirto faylal aad u waaweyn hal ama dhowr qof isla waqti isku mid ah, kaliya adoo isticmaalaya koontada emaylka.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican ee ka sarreeya fursadaha kale waa taas xitaa ma weydiisato diiwaangelin hore. Ma weydiinayso qofka qaata faylka sidoo kale. Markaa waan fulin karnaa hawlo anaga oo aan dhib ka qabin inaan rakibo ama la xiriirino waraaqeena duubitaan kasta, kaliya dooro feyl oo dir adigoo isticmaalaya koontada emaylka.
Faa'iidooyinka isticmaalka WeTransfer
Codsigan nama weydiinayo nooc kasta oo diiwaangelin ah, laakiin haddii aan sameyno waxaan abuuri karnaa koontooyin shaqsiyadeed, xitaa waxay leedahay a qorshaha lacag bixinta oo aan ku raaxeysan karno xulashooyin aad u horumarsan. Kuwa ugu caansan shaki la'aan u dir faylasha ilaa 20 GB halkii aad ka diri lahayd 2 GB oo aan ku wareejin karno bilaash.
Qorshahani wuxuu sidoo kale na siinayaa faa iidooyin kale oo aad u faa'iido badan isticmaalaha aadka u horumarsan. Meel 100 GB ah oo lagu kaydiyo daruurta, GB badan haddii aan kaydinayno fiidiyowyo badan ama Sawirro, iyo sidoo kale mashaariic. Waxaan awood u leenahay inaan ku hagaajino koontadayada dhinacyo kala duwan oo loogu talagalay bogga halkaasoo isticmaaleyaasha kale ay ka soo dejisan karaan faylalka aan wadaagno. Qorshahan lacag-bixinta ayaa leh Qiimaha € 120 sanadkiiba ama € 12 bishii.
Sidii aan horey uga soo hadalnay, diiwaangelinta hore looma baahna in la isticmaalo adeegga wadaagga faylka bilaashka ah ee WeTransfer. Habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee adeeggan loo adeegsado ayaa si toos ah uga socda biraawsarka shabakadda.
Marka hore waxaan helnaa boggaaga websaydhka rasmiga ah ee shabakaddayada aannu jecel nahay. Marka ugu horeysa, waxay na weyddiisan doontaa haddii aan rabno inaan adeegsanno nooca bilaashka ah ama haddii aan doorbidno inaan ku kordhinno qorshaha dheeriga ah faa'iidooyinka kor ku xusan. Waxaan gujinaynaa inaad ii geeyso Bilaash si aan ugu dirno feylashayada waaweyn si bilaash ah.
Hadda waxaan ka heli doonnaa nafteena bogga adeegga, oo leh naqshad soo jiidasho leh oo aan awoodno oo keliya dooro ikhtiyaarka ka muuqda sanduuqa dhanka bidix. Marka ugu horeysa ee aan isticmaalno, waa inaan aqbalnaa shuruudaha oo aan aqbalnaa heshiiska (wax caadi ah adeeg kasta oo khadka tooska ah). Waxaan gujineynaa inaan aqbalno oo aan sii wadno.
Hadda sanduuqa ayaa isbedelaya si loo muujiyo mid kale meesha rarka xogta faylashaada. Waan buuxinay si aan u sii wadno.
Waxaan gujineynaa badhanka + si aan ugu darno feylasha aan dooneyno inaan ka dirno kombiyuutarkayaga. Si tan loo sameeyo, barowsarku wuxuu furi doonaa faylka baaraha si uu u xusho iyaga. Xusuusnow iyadoo nooca bilaashka ah cabirka ugu badan ee faylkiiba yahay 2 GB. Iyo sidoo kale wadar ahaan, taasi waa, haddii aan dooranno dhowr feylal, waa inaysan ka badnaan miisaan ahaan 2 GB.
Ka dib markii lagu daro faylasha aan rabno inaan wareejino waxaan gujineynaa astaanta saddexda dhibic in aan bidix u nahay si dooro habka aan rabno inaan ula wadaagno faylasha.
Waxaan haysanaa laba ikhtiyaar. Haddaan dooranno xulashada emaylka, WeTransfer Waxay ka taxadari doontaa gelinta feylasha daruurtooda markay hawshu dhammaato waxay u soo diri doontaa emayl cinwaanka aad gasho, taas oo muujinaysa qofka qaataha ah inaad u dirtay qaar faylal ah oo ay soo dejisan karaan iyaga oo gujinaya xiriir emaylkooda.
Doorasho kale waa "Xiriir" taasi waxay abuuri doontaa xiriirin si ay ula wadaagaan iyada oo loo marayo codsi fariin sida Telegram ama WhatsApp. Xiriiriyahaan wuxuu u weecinayaa qofka qaata bogga WeTransfer si ay ugu soo dejistaan ​​feylasha kumbuyuutarkooda halkaas.
Haddii aan hayno qorshaha lacag bixinta, Waxaan dhaqaajineynaa dhowr ikhtiyaar oo noo oggolaanaya inaan horumarinno amniga faylalkayaga isla markaana u dejiyo taariikh uu dhacayo iyaga.
Shaki la'aan, xulashada emaylku waa tan ugu badbaado badan uguna fudud, maaddaama ay ku filnaan doonto gelitaanka cinwaanka iimaylka qaataha iyadoon ku xirnayn helitaankooda ama codsigooda farriinta. Waxaan ku dari karnaa farriin tilmaam ah haddii loo baahdo.
Marka feylasha la diro, garaaf ayaa lagusoo bandhigi doonaa boqolleyda hawlgalka la dhammaystiray. Marka inta boqolkiiba la dhammaystiray kama xidhi karno biraawsarka webka, mana damin karno kombuyuutarka dabcan. Waqtiga wareejinta waxay kuxirantahay labadeena internetka iyo buuxinta adeegaha.
Markii aan dhammeyno waxaa noo soo diri doona emayl cinwaanka aan soo tilmaannay si uu noogu wargeliyo dhammaystirka wareejinta. Sidoo kale qofka qaata wuxuu sidoo kale heli doonaa emayl ka warramaya soo dhaweynta faylasha si loo soo dejiyo. Marka qaataha uu soo dejiyo feylasha, waxaan heli doonaa emayl mar kale oo ogeysiinaya rasiidka oo aan soo dejisanay dhankooda.
Ku isticmaal WeTransfer mobilka
Waxaan ikhtiyaar u leenahay inaan feylasha ka dirno Smartphone-keena, ikhtiyaarka ugu fiican ee tan waa in lagu rakibo arjiga macruufka ama Android. Hawlgalka ku jira noocyada moobiillada waxay la mid yihiin kan bogga, kaliya waa inaan doorannaa feylka aan dooneyno inaan wadaagno oo aan dooranno barnaamijka ama barnaamijka aan u diri doonno xiriirka soo dejinta.
Developer: Wareejinta BV
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » WeTransfer: waa maxay sideese u shaqaysaa?
Amazon Fire TV Stick (2020), oo heer sare ah oo shaqada sii socota